MediaTek kwupụtara ọkwa ọhụrụ Helio G85 | Gam akporosis
MediaTek kwupụtara ọkwa ọhụrụ Helio G85
MediaTek ekwuputala ọkwa ya ohuru gị Helio G85 mgbawa, nhazi nke ibido ibido ekwentị Ihe ngosi RedN 9 si Xiaomi. The Taiwanese emeputa mmelite G-usoro na mma processor si Helio G80 nlereanya, ekwuputara CPU kacha ọhụrụ na mbido February.
G80 na G85 ga - enwe ike ibikọ ọnụ maka na ha yitere oke, ọdịiche dị n’etiti ha bụ ọsọ GPU ka mma yana itinye teknụzụ dị iche iche. Iji mee ka ihe ka njọ, Helio G85 na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ akpọrọ "VoW" (Voice on Waking) ma rụọ ọrụ nke ọma karịa na egwuregwu.
1 Nke a bụ Helio G85 ọhụrụ
Nke a bụ Helio G85 ọhụrụ
MediaTek chọrọ idebe otu CPU, ọ bụ 8 cores na Cortex-A75 cores abụọ na-arụ ọrụ na 2,0 GHz na isii Cortex-A55 nkeji nwere ọsọ nke 1,80 GHz.Ọ na-eme ka ị hụ ezigbo arụmọrụ na ngwa, egwuregwu na usoro nke ụdị ọ bụla, ọ dị ezigbo mma ma na-eri obere ume.
GPU bụ Mali-G52, ọsọ na-esi na 950 MHz gaa 1,0 GHz, nke bụ nha 50 MHz dị elu ma na-ahụ anya na omume dịka akọwapụtara site na MediaTek n'onwe ya na ntọhapụ mgbasa ozi ya. Ọ na-ejigide atụmatụ nke Helio G80 dị ka VoW na teknụzụ HyperEngine Game kachasị mma.
MediaTek na-ekwe nkwa amụma dị mma nke mgbanwe dị n'etiti Wi-Fi na LTE, mgbawa ahụ nwere ike ịgbanwe n'etiti netwọkụ abụọ na naanị 13 ms, na-enye njikọ enweghị lag. Ihe nhazi ohuru a di iche na oku n'oge egwuregwu a site n'aka ndi oru n'enweghi njikọ data. Ugbua ụfọdụ ekwentị dị elu na-arịa ihe a.
Nlereanya Helio G85
Nhazi 64 ibe n'ibe
Ntupụta 12 nm
GPU Mali-G52 na 1 GHz
Nuclei 8 (2x na 2.0 GHz - 6x na 1.80 GHz)
Ikike ncheta 4 MHz LPDDR1600X
Njikọ 4G LTE - Wi-Fi - Bluetooth 5.0
Mgbawa MediaTek Helio G85 E zigala ya ndị nrụpụta, nke mbụ iji wụnye ya bụ Redmi, mana ndị ọzọ ga-agba mbọ ịmalite ngwaọrụ ọhụrụ na 2020 a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MediaTek kwupụtara ọkwa ọhụrụ Helio G85
Google na-ezube ịnyegharị Android TV na Google TV
Emeputara imepụta ekwentị Cubot ọhụrụ